Furitaanka dukumintiyada .odt iyo .ods ee ku jira chromium leh Akhristaha 'OpenDocument Reader' Laga soo bilaabo Linux
Furitaanka dukumintiyada .odt iyo .ods ee ku jira chromium leh Akhristaha 'OpenDocument Reader'
Dib-u-eegis yar ayaan ku samaynayaa kordhinta loo heli karo Chrome / Chromium Waxaan helay mid aad u xiiso badan, taasna waxay tahay in hadda aan haysanno suurtagalnimada inaan ku aragno .odt iyo .odskeena khadka tooska ah illaa ReadDocument Reader.
Anigu shakhsiyan waan isku dayay waxayna ila tahay aniga ikhtiyaar aad u xiiso badan, munaasabadahaas oo aan ku jirno kumbuyuutar kii aan ahayn oo aan lahayn OpenOffice ama LibreOffice. waxay leedahay is dhexgal aad u wanaagsan oo leh google drive oo noo ogolaanaya inaan furno faylalka .odt ee ku keydsan adeeggan. Waxa kale oo jira nooc loogu talagalay android laakiin waa inaan sheegaa inaanan isku deyin.
Baahnayn in la sheego, waa software bilaash ah oo shati ka haysta gpl-ga. Tani waa boorka (blog) ee mashruuca kuwa doonaya inay eegaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Furitaanka dukumintiyada .odt iyo .ods ee ku jira chromium leh Akhristaha 'OpenDocument Reader'
Ma aanan aqoon iyada. Xiiso leh
Waa salaaman tahay, horta marka hore waxaad dhahdaa su'aasha aan weydiin doono ayaa ah meeshaani ma ahan barta laakiin waxaan u baahanahay jawaab mana ogi meel aan raadsado. Waxaan ubaahanahay inaan ku rakibo chromium-ka CentOs 5.9 si kastoo aan u fiiriyana ma arko habka loo sameeyo waxaanan ka fikiray markaan arkay maqaalkan in laga yaabo inaad halkan igu caawin karto. Mahadsanid.
wax fikrad ah, waligay kamaan isticmaalin 'distro'. weydii qaybta rasmiga ah ee 'os os forum' http://www.centos.org/modules/newbb/
Khalad Office Office "Font La Waayay: Wingdings, Wingdings 2, wingdin ..." oo lagu hagaajiyay Mint Linux
Muxuu Linux noqon lahaa la'aan Ubuntu?